Izinzuzo eziyi-9 Uju Lokusebenzisa Ubuso - Isikhumba
Izinzuzo ze-9 Kungani Kufanele Usebenzise Uju ebusweni
9 Benefits Why You Should Use Honey
Bathi, imvamisa izinto ezinhle kakhulu ziphambi kwethu futhi siyehluleka ukunaka. Uju luyisithako sobuhle esingaphansi kakhulu kunikezwe indawo yaso ejwayelekile futhi engaguquki ekhabethe lasekhishini. Kudala lapho ibhizinisi lobuhle lalingekho futhi i-au naturel kwakuwukuphela komzila, i-Ayurveda yaletha abaningi izinzuzo zoju phambili. Ngenkathi ucwaningo lwesayensi nokwenziwa kwalo kuthatha le mboni, uju lwaphulukana nokuthandwa kwalo njengesinye sezithako eziningi ezifihliwe ezafika emaphaketheni kanokusho nangamagama wabathandi.
Njengoba izindlela zesimanje (nokukhathazeka) kungena ezimpilweni zethu ngendlela engakaze ibonwe ngaphambili, nakhu ukwenza uju sekubuyela ezisekelweni zobuhle — okuluhlaza nokukhohlisayo! Ngenkathi usebenzisa uju ebusweni ukuthola lokho kukhanya okubonakalayo kuyinto yokuqala efika engqondweni, kuningi kakhulu kulesi sithako seqhawe. Funda ukuze wazi kabanzi.
Ukwahlulela le ncwadi ngekhava yayo, akunjalo? Uju lubalwa phezulu ohlwini njengenye yezithako ezinhle kakhulu ongazengeza kumbuso wakho wobuhle. Yibize ngokuthi igolide eliwuketshezi futhi izophila ngokukhanya okuncane. Ngena ngaphakathi futhi uzothola umcebo wezinzuzo zobuhle obuhlanganisa isikhumba, izinwele kanye nempilo yezipikili. Ngakho esikhathini esizayo lapho uzizwa uthanda ukuzitotosa nge ikhambi lasekhaya welulela uju jar nazi zonke izizathu zokuthi kungani:
3. Ukukhanya kwesikhumba
Isine. Ukuhlanzwa kwePore nokuqinisa
5. Yilwa Nezinkinga Zesikhumba
6. Amabala Abunayo
7. Ukushiswa yilanga
8. Ukunciphisa imibimbi
9. Ukwelapha Izindebe Eziqhekekile
10. Imibuzo evame ukubuzwa
Mhlawumbe kuwuphawu lokuguga, ukungabi namanzi, omunye nje umaye wasebusika noma mhlawumbe kungokwakho isikhumba esomile thayipha okudinga ukuthambisa okukhulu unyaka wonke. Ukoma kubangela ukungakhululeki (Cabanga: ukuxebuka kwesikhumba), kwenze isikhumba sakho sibonakale sifiphele futhi singenampilo, futhi sisebenze njengesimemo sezinduna. Uma isikhumba sakho esomile sikwenza ukhethe okhilimu abanamafutha kanye nama-lotion enza okubi kakhulu kunokuhle, uju ulapha ukuzokusindisa.
Uju luyinto ethambile, into ekwenza kokubili, idonsa umswakama futhi isize ukuyigcina. Ukuyenza lula, ukufaka isicelo uju luzothuthukisa ubuso bakho ngaphandle kokwenza amafutha kakhulu. Njengoba kusiza ukushaya ibhalansi elungile, ilungele bonke izinhlobo zesikhumba (yebo, ngisho nalabo kini abamatasa besula lelo sheen le-sebum eyeqile ebusweni bakho).
Ithiphu: Faka esikhundleni se- ukugeza ubuso ngoju . Mane usebenzise isipuni esisodwa soju ebusweni bakho, uhlikihle ngobumnene ukunyakaza okuyindilinga okuncane, bese ugeza uhlanzekile.
Ukungcola kanye nokungcola kwenza ukukhishwa exfoliation umkhuba obalulekile wobuhle okufanele uphathwe okungenani kanye ngesonto. Kodwa-ke, eziningi, ikakhulukazi nge isikhumba esibucayi , ukugwema ukukhishwa njalo kwamafutha njengokuhlanza okunzima futhi eminye imikhiqizo ethengwe ezitolo ijwayele ukucasula isikhumba. Ukususwa kwamangqamuzana esikhumba afile kuyinto edingekayo, okwenza ukukhishwa exfoliation kungabi isinyathelo sokweqa ku inqubo yobuhle . Lokhu kulapho ikhono elincane lokukhipha uju liza phambili. Kuzokusiza ukufezekisa isikhumba esisha, esibushelelezi ngokususa amangqamuzana esikhumba afile ngobumnene futhi ngaphandle kokuphazamiseka.
Ithiphu: Ukuze uthole imiphumela emihle, hlanganisa uju noshukela onsundu, okungcono uhlose ama-granules amahle. Ngenye indlela, ungaya kuma-oats futhi uju ebusweni khuhla .
Wake wezwa, ukujaha lokho ukuvutha kwezinyosi ? Lokho kufingqa konke kahle. Ubukhazikhazi obubucayi obukhipha uju ekubukekeni kwalo buholela esikhunjeni sakho lapho usetshenziswa ngokwezihloko. Lesi kungaba yisikhathi esihle sokuzindla ngokuthi kungani zonke izindlela zokwelapha ubuso be-de-tan zinezinyosi njengesithako sayo esiyinhloko. Kuyasiza susa i-tan , kuthuthukisa ukubukeka ngalokhu kukhulisa ukukhanya kwemvelo.
Ithiphu: Zama i- iphakethe lobuso boju-yogathi ngenxa yalokho kukhanya okungenaphutha! Uma uhlose ukususwa kwe-tan, yihlanganise nejusi yetamatisi.
Ukuhlanzwa kwePore nokuqinisa
Indawo yamandla yama-antioxidants, isinqandakuvunda, nezakhi zokulwa namagciwane, uju usiza ukuqeda amakhanda amnyama namhlophe futhi isebenza njenge-ejenti ephumelelayo yokuhlanza i-pore nokuqinisa.
Ithiphu: Khetha i- amafutha othambisa isikhumba njengekakhukhunathi noma ijojoba ngezinzuzo ezingeziwe.
Yilwa Nezinkinga Zesikhumba
Izakhi ezifanayo ezenzayo uju umhlanzi omkhulu , idlala indima ebalulekile ekuhlanzeni isikhumba. Lokhu kuyisengezo esihle kumkhuba wakho wokunakekelwa kwesikhumba uma ulwa induna yabantu abadala . Abaningi baye babona izinzuzo zokuphulukisa uju ngisho nasesimweni sezimo zesikhumba ezizimele njenge-eczema ne-psoriasis.
Ithiphu: Yenza ukuhlolwa kwe-patch ngaphambi kokuzitika ekhaya ukwelashwa kwezinyosi .
Uju hhayi kuphela kusiza ukuqeda izinduna kodwa futhi idlala indima ebalulekile ekunakekelweni ngemuva. Ekugcineni kukhona ukwelashwa kwemvelo kwalezo zindawo ezinenkani nezisihla ezihlala isikhathi eside ngemuva kokuphela kwama-breakout.
Ithiphu: Khetha i-organic, eluhlaza okuhlukile koju ukuthola okungcono kakhulu kukho.
Uju lusebenza njengomthombo wokudla kwezicubu ezilimele. Ukulimala kwelanga ngokuba ngesinye sezici ezinkulu ngemuva kokukhathazeka kwesikhumba kwanamuhla, yenza ukuthinta okuphulukisayo koju kubaluleke kakhulu. Mane nje usebenzise ungqimba omncane we uju usiza ukudambisa ukuvuvukala futhi kunciphisa ububomvu ngokushesha.
Ithiphu: Yenza unamathisela uju futhi aloe vera ukudambisa ukushiswa yilanga.
Kungaba yingcindezi futhi amehlo akhathele , ukukhukhumala ngemuva kobusuku bokuphuza kakhulu utshwala, noma ukuguga kungabonakali ngokusobala uphawu lwayo, imvelo yobusi emnene iyenza iphephe ukuthi isetshenziswe esikhunjeni esincanyana, esizwelayo ngamehlo nemiphumela emihle.
Ithiphu: Nciphisa uju emanzini ahlungiwe ukuze kusetshenziswe kalula futhi kushelele. Yishiye imizuzu engu-15 kuya kwengu-20 ngaphambi kokugeza ubuso bakho.
Ukwelapha Izindebe Eziqhekekile
Nweba izinzuzo zokuthambisa uju ezindebeni zakho bese uvalelisa ukoma, izindebe eziqhekekile .
Ithiphu: Ngena ku ushukela-uju khuhla ngezindebe ze-plumper, ezibomvana.
U. Nginesikhumba esithanda izinduna. Yiluphi uhlobo loju okufanele ngilukhethe ngemiphumela emihle kakhulu?
TO. Uju lukaManuka, olususelwa esihlahleni sikaManuka — owokuzalwa eNew Zealand ludume ngezinzuzo zalo zokwelapha. Kodwa-ke, uma ingatholakali kalula, khetha okumsulwa, okuluhlaza uju ukwelapha induna yakho . Ngaphezu kwalokho hlaza uju ukuze ulusebenzise kalula futhi ugweme ukuluhlikihla ngoba lungathukuthelisa isikhumba. Uma kwenzeka ufuna iphakethe lobuso elenziwe ekhaya, amaqembu eyogathi kahle noju ukwelapha isikhumba esithanda izinduna.
U. Ngingaba neguliswa yini ngoju?
TO. Ezinye izinhlobo ezithengwa esitolo zilayishwa ngoshukela, ngakho-ke zingavimba ama-pores. Ukusebenzisa uju wekhwalithi empofu kuzolokhu kululaza ikhwalithi yesikhumba sakho, futhi kungaholela ekuphumeni. Njengoba kushiwo ngaphambili, namathela uju oluhlaza ukuze uthole imiphumela emihle. Futhi, hlola isichibi nganoma yikuphi ukusabela ngaphambi kokukusebenzisa ebusweni bakho bonke.
U. Yisiphi isithako sekhishi esisebenza kahle noju, futhi ngani?
TO. I-yoghurt igcwele izindawo ezinomsoco, zokuhlanza nezokulwa nokuguga, okwenza kube ukwengeza okuhle ku- amaphakethe wobuso bezinyosi . Ingcosana ye-turmeric ingangezelelwa ukukhulisa umphumela wokulwa namagciwane kumaphakethe we-anti-acne. Ukususwa kwe-tan khetha ujusi wetamatisi. Ukwehlisa ukushiswa yilanga, ungaxuba amanzi e-rose noju lokhu kunikeza uju ukungaguquguquki okungcono, kukwenze kube kuhle nasezilwelweni zobuso ezilwa nezinduna nazo.
kanjani ukususa izinwele ebusweni
ikhambi lokumisa ukuwa kwezinwele
izinyathelo zokuvimbela ukuwa kwezinwele
uhlobo oluhlukile lwe-yoga enesithombe